MACASALAMA: Xabi Alonso & Philpp Lahm- Maxay Wax Kasta Oo Wanaagsani U Soo Dhamaadaan Iyo Bayern Munich Oo Sharaftay Xidigaheeda Ciyaaray Kulamadii Abid Ugu Danbeeyay. - Laacib.net
MACASALAMA: Xabi Alonso & Philpp Lahm- Maxay Wax Kasta Oo Wanaagsani U Soo Dhamaadaan Iyo Bayern Munich Oo Sharaftay Xidigaheeda Ciyaaray Kulamadii Abid Ugu Danbeeyay.
Wax kasta oo wanaagsani waxay leeyihiin meel ay ku dhamaadaan, waxaana ka danbaysa kaliya xusuus iyo taariikh, waxaana kubbada cagta maanta macasalaameeyay laba ciyaartoy oo ka mid ahaa xidigaha ay jamaahiirta kubbadu ixtiraamka wayn u hayeen haddii ay kooxdooda taageerayeen iyo haddii ayna taageeranynba.
Xabi Alonso iyo Philpp Lahm ayaa saftay kulamadoodii abid ugu danbeeyay kubbada cagta ee waayo ciyaareed oo layaableh oo ay soo qaateen 20 kii sano ee ugu danbeeyay. Xabi Alonso ayaa waayihiisa ciyaareed ka soo bilaabay kooxda ka dhisan magaaladii uu ku dhashay ee Real Sociedad wuxuuna waqti fiican ku soo qaatay Liverpool, Real Madrid iyo Bayern Munich oo uu waayihiisa ciyaareed ku soo gabgabeeyay.
Philpp Lahm oo waqti dheer kabtan u soo ahaa kooxda Bayern Munich ayaa isna ciyaarista kubbada cagta si rasmi ah uga fadhiistay isla markaana saftay kulankiisii abid ugu danbeeyay laakiin waxa uu la khaas yahay taariikh si wayn loo xusi doono waana ciyaartoy aan waligii kaadhka cas loo taagi waayihiisa ciyaareed ee kubabda cagta inkasta oo uu waliba difaac ahaa.
Bayern Munich ayaa macasalaamayn wayn u samaysay labadan xidig ee kooxdeeda ka baxaya iyada oo jamaahiirta Bayern Munich ay mid kastaba si gaar ah iskugu taageen intii lagu jiray kulankii ay Bayern Munich 4:1 ku xasuuqday kooxda Freiburg.
Qoraalada dareenka wayn ku abuuray kubbada cagta ee ay Bayern Munich soo qortay si ay labadan xidig u xusto ayaa ah qoraal ay soo raacisay sawirka Alonso iyo Lahm waxaana lagu yidhi qoraalkan:” Maxay tahay sababta ay waxyaabaha fiicani u dhamaanayaan?’
Why do all good things have to come to an end? 😭 #DankePhilipp #GraciasXabi pic.twitter.com/z0QlpwLmZb
Bayern Munich ayaa xili ciyaareedkan ku dhamaysatay iyada oo aan hal guuldaro ku arkin garoonkeeda Allainz Arena waxaana guushan ka caawiyay Arjen Robben, Arturo Vidal, Franck Ribery iyo Joshua Kimmich oo min hal gool dhaliyay. Bayern Munich ayaa la gudoonsiiyay koobka horyaalka Bundesligaha ee ay markale sii difaacdeen si ay u sii wataan maamulista horyaalka Germany.
Si kastaba ha ahaatee, kubbada cagta aduunka ayaan markale fursad u heli doonaan in ay ku raaxaystaan waayihii ciyaareed ee dahabiga ahaa ee Philipp Lahm iyo Xabi Alonso oo maanta si rasmi ah uga macasalaameeyay kooxdooda Bayern Munich iyo waliba jamaahiirta kubbada cagta.